अगस्ट 17, 2019 अगस्ट 17, 2019 साइन्स इन्फोटेक0Comments डा. राम बहादुर बोहरा, पैसा, मानिस
मानिसले किन दिन्छ पैसालाई महत्व ? अन्याय र न्यायलाई केलाएर हेर्दा कमजोर पक्षको कुनै गल्ति नभएपनि सजाए पाएको देखिन्छ । यसको पछि म मान्छेलाई कदापि दोष दिन्न म त्यो पैसालाई दोषी ठहराउछु । जसले जे गरेपनि पैसाको लागि गरेको देखिन्छ । पैसाको पछि कानुन समेत झुकेको छ ।
नत्र पैसा लिएर दोषीलाई छोड्नुको पछि कानुनलाई पनि पैसाले नछोडेको देखिएको छ । आज यदि कानुनले पैसाको मुख नहेरी भटाभट दोषीलाई कार्बाही गरेको भए शायद कमजोरले पनि न्याय पाउने थिए ।
हामीले हमेसा पैसालाई होइन गल्ती गर्ने जोसुकैलाई सजाय दिन सक्नुपर्छ । पैसालाई महत्व दिने जुनसुकै किन नहोस् त्यसलाई दोषी ठहराउनु पर्दछ । मानिसको जीवन पैसाको लागी नष्ट गराउदा पापको भागी कानुनको फैसला गर्ने जो कोहि दोषी ठहर्छ ।
पैसा सब थोक होइन पैसालाई ठूलो मान्ने हाम्रो समाज गलत जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पैसामा दाँज्नु भनेको गलत हो । समाजमा राम्रो काम गरौं पैसाले आफै घर भरिन्छ । पैसालाई महत्व त्यति बेला दिनुस जसको साहेताले निर्दोषको ज्यान बचाउन सकियोस ।
हामीले बिरामी भेट्न जान्छौं । जाँदा फलफूल बोकेर गएका हुन्छौं मेरो बिचारमा यो गलत हो की जस्तो लागेको छ । फलफूलको सट्टा यदि हामीले पैसा दिन सकेको भए ठूलो उपलब्धि हुने थियो तर पैसालाई गलत तरिकाले युज गर्दा फाइदा होइन बेफाइदा भएको छ ।
← रोग र भोक हटाउन कुन समयमा कति खाना खाने ?
स्वास्थ्यको लागि भईकटहर खानुका फाइदाहरू →